Gemlight Bush Style Machetes waa caan caanna waa nooca ugu fiican iibinta baangadda. Waa baangado ujeeddo leh oo idil oo leh daab, dhabarka toosan. Mindidu waxay u egtahay inay si siman u miisaaman tahay oo caddaalad adag tahay. Aad loo qaadi karo, ayaa lagu rakibi karaa galmo si fudud loogu qaado.
Mindhicilku waxyar buu qaloocan yahay, oo god ayaa ku yaal caarada laalaad. Garka gadaashiisu way fidsan tahay. Dhismaha taangiga oo buuxa wuxuu ku dhammaadaa madaxa qaawan ee tangka oo ku dheggan, oo leh god loogu talagalay suunka curcurka. Waxay isticmaashaa SAE1070 bir bir sare ah oo daabkeedu geddisan yahay 800degree iyo tempering. Daabku wuxuu isku daraa adkaanta (HRC45-55) iyo dabacsanaan iyo adkeyn. Ku kasbato daabku tayada ugu fiican marka goynta iyo goynta u fiican. Baangadu waxay leedahay daab af leh oo fiiqan oo ugu fiican jarista iyo goynta
Waxaa jira noocyo dherer daab ah oo ay bixiyaan shirkadaha sameeya baangada. Waxay ka bilaabantaa 12 inji waxayna aadi kartaa 24 inji ama ka badan. Marka waa muhiim in la go'aamiyo dhererka daabku iyadoo loo eegayo baahidaada ka hor intaadan bixin. Mindida dheer ee daabku waxay si fiican ugu shaqeyn kartaa nadiifinta burushka maadaama dhererku gacmaha ka ilaaliyo dhaawacyada.
Summad Gemlight ama OEM / ODM Qaabka Blade Bush
Dhererka Baaxadda 10 ilaa 26inch Wadarta dhererka amarro
Qalabka Blade Badeecada Birta Kaarboon Sare leh ee Mn La Kobciyey / SAE1070 Daaweynta Kulaylka Ballaadhan Deminta Bidaarta iyo Cadaadiska
Qalbi Adag HRC45-55 Tang buuxa Haa
Baal Blade Sadarka sadarka ah Nooca Blade Edge Pre-Sharped
Daaweynta dusha sare Sifiican loo safeeyey ama Buufiyey Blade dahaarka leh Ilaalinta dusha sare Gemlight Saliida Gaarka ah ee ka-hortagga miridhku dahaarka leh
Dhumucdiisuna way Xakamaynta Sare: 2.0mm Talo: 2.0mm ama OEM Faahfaahinta daab Shiidi Primary aasaasay warshadda
Astaamaha Gacanta Haya Wax ka qabato Alwaax ama Balaastik
Wadanka asalka Shiinaha Kooxda Dhererka 10inch kore
Waa tan ugu fiican uguna wanaagsan ee loo isticmaalo xereynta beeraha sida qumbaha, mooska iyo miraha kale. Sidoo kale waa mindi ugu fiican dadka ka baxsan duurka iyo meelaha duurjoogta ah ee la jaro si loo baneeyo waddo duurka ku taal.
Xirxirida waxaa kujira 60 kumbiyuutar / ctn, mindi kasta oo kujirta hal bac, kadib 5 kartoon halkii kartoon oo ay kujiraan warqad qoyaanka lidka ku ah.
Xirmo sida aad u baahan tahay. Sidoo kale waan bixinaa
Kaar laalaada / Kaarka warqadda / bacda PVC / Khariidadda
Iyada oo galka
Nala soo xiriir maanta Catalog iyo qalab dheeraad ah ayaa la heli karaa!
Hore: Silig galvanized Hot diidan
Xiga: mindi bakoorad